Wararkii Caalamka ugu dambeeyay iyo warqabadka SBC International – SBC
Wararkii Caalamka ugu dambeeyay iyo warqabadka SBC International
Wararka caalamka ugu waa weyn waxaa ka mid ah Faransiiska oo sheegay in kun Askari uu kala baxayo Afgaanistan, Taliban oo sheegtey dilkii nin la dhashay Madaxweynaha Afgansitan, Dawlada cusub ee Koonfurta Suudaan oo codsi u gudbisey Qaramada Midoobay & warar kale.
Faransiiska oo kala baxaya kun askari dalka Afghanistan
Kabul:- Madaxweynaha dalka Faransiiska Nicola Sarkozi oo booqasho lama filaan ah ku tagay magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda France ay kala soo baxayso dalka Afghanistan kun askari oo kamid ah ciidamada caalamiga ee ka howlgala dalka Afghanistan ilaa iyo dabayaaqada sanadka 2012.
Sarkozi oo muddo shan saac ah ku sugnaa magaalada Kabul ayaa sheegay in ciidanka faransiiska ee ku sugan gobolka Kabisa ee ku yaala woqooyi bari caasimadda Kabul ay sii joogi doonaan halkaas.
Booqashada Sarkozi ee dalka Afghanistan ayaa ku soo beegmaysa xilli xoghayaha gaashaandhiga mareykanka ninka lagu magcaabo Leon Panetta uu booqday dalkaas horaantii toddobaadkan .
Dhanka kale saraakiisha milatariga Britain ayaa ku eedeeyey xoogaga Daalibaan in ay wadaan isku day ay ku doonayaan in ay ku waxyeeleeyaan qorshaha Britain ay amaanka gobolka Helmand ugu warejinayso maamulka Afghanistan.
Amaanduulaha guutada afraad ee kooxda Scotland ee boqortooyada Colonel Alastar Aytkan ayaa sheegay in waqtiga lagu wareejinayo ciidamada amaanka Afghanistan amniga gobolka aysan waxba iska bedelin maadaama Afghanistaniyiintu ay mas’uul ka ahaayeen gobolka tan iyo horaantii sanadkan.
Dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay taageersan tahay qaraarkii maamulada Afghanistan iyo Pakistan ee ku aadanaa dhisitaanka ciidan milatari oo isku dhaf ah si looga hortago mid lamid ah dhacdooyinkii kadhacay xadka labada dal toddobaadkii la soo dhaafay.
Dowxa oo martigelin doonta heshiis lagu saxiixayo nabad ku soo dabaalidda gobolka Daarfuur
Dowxa:-Caasimadda dalka Qadar ee Dowxa ayaa isu diyaarinaysa martigelinta xafladda saxiixidda heshiiska nabadda u dhexeeya xukuumadda Sudan iyo dhaqdhaqaaqa xoreynta iyo cadaaladda ee mucaaradka Darfuur .
Wargeyska Al-sharqi ee ka soo baxa Qadar oo soo xiganaya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Qadar ninka lagu magcaabo Axmed Bin C/aahi Aala Maxamuud ayaa sheegay in xafladda saxiixitaanka ay ka soo qeyb geli doonaan amiirka dowladda Qadar Sheekh Xamad Bin Khaliifa iyo madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Albashiir iyo dhowr madaxweyne oo ka socda dowladaha deriska la ah dalka Sudan.
Sidoo kale waxaa ka soo qeyb geli doono midowga Africa, QM, Jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga islaamka.
Dhanka kale sirdoonka Sudan ayaa xabsiga ka sii daayey kadib markii amar uu ku bxiyey Albashiir lixdan maxaabiis oo kasoo jeeda gobolka Darfuur ee galbeedka Sudan.
Maxaabiista la sii daayey ayaa waxa kamid ah nin ay walaalo yihiin hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo sinaanata Khaliil Ibraahim, kaasi oo ka qeyb galay weerar lagu qaaday Um Durmaan bishii May 2008 .
Koonfurta Sudan oo u gudbisay QM dalab ku aadan in ay kamid noqoto wadamada xubnaha ka ah QM
Juba:- Madaxweynaha Jumhuuriyadda Koonfurta Sudan ninka lagu magcaabo Silva Kiir Miyaardeet ayaa gudbiyey dalab ku aadan sidii ay u heli lahayd dowladda Cusub xubinnimo buuxda QM.
Madaxweyne Kiir ayaa ka codsaday xoghayaha guud ee QM Baan Kii Muun in codsigiisa loo gudbiyo golaha amaanka si sida ugu dhaqsaha badan looga arrinsado islamarkaana koonfurta Sudan ay aqbalsan tahay xeerarka QM.
Golaha amaanka ayaa la filayaa in uu jimcaha soo socda ka munaaqashoon doono qaraar ku aadan aqbalaada xubin nimada koonfurta Sudan ee QM.
Hadii la aqbalo dalabka jumhuuriyadda koonfurta Sudan waxa ay noqon doontaa dowladii 193 ee xubin ka noqota QM.
Dhanka kale golaha amaanka oo uu jarmalka guddoomiye ka yahay hadda ayaa u codeeyey in la soo gabagabeeyo howlaha ciidamada nabad ilaalinta ee hoostaga QM ee ku sugan Sudan loona yaqaan UNAMIS.
Wakiilka mareykanka u fadhiya QM haweenayda lagu magacaabo Susana Rice ayaa carabaabtay walwalka dalkeeda ka qabo xaaladda amaan ee sii xumaanaysa ee ay ku sugan yihiin shacabka ku nool xadka u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta iyo dhibaatooyinka bani’aadamnimo ee ka taagan deegaankaas.
Daalibaan oo sheegatay mas’uuliyadda dilkii nin ay walaalo ahaayeen madaxweynaha Afghanistan
Kabul:-Dagaal yahanada Daalibaan ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen dilkii nin ay walaalo ahaayeen Madaxweynaha Afghanistan, Xamiid Karzai, kaasi oo lagu dilay magaalada Kandahar ee koonfurta Afghanistan.
Wakaaladda wararka France Press oo soo xiganaysa afhayeenka Daalibaan Yuusuf Axmed ayaa sheegtay in xarakada Daalibaan ay u xilsaartay dilka Ahmed Wali karzai oo ay walaalo ahaayeen Xamiid Karazai, madaxa ilaaladiisa shakhsiga ah oo muddo la soo shaqeynayay, islamarkaana uu ku dhintay xabadihii ay ku fureen ilaaladii Axmed Wali.
Afhayeenka ayaa ku tilmaamay dilka mas’uulkaas in uu ahaa howlgalkii ugu balaarnaa ay sameeyeen Daalibaan tan iyo intii ay ambaqaadeen weeraradooda xagagan islamarkaan ay tahay mid ka mid ah guulihii ugu weynaa oo 10 sano oo dagaal socday.
Madaxweyna Karzai, oo Shir saxaafadeed ku qabtay kabul, ayaa waxaa uu sheegay in qoys kasta oo Afghanistan ah ay sidaas oo kale ku dhacday.
Axmed wali Karzai ayaa ahaa siyaasi awood badan, oo maamula Golaha Qandahaar.
Waxaana lagu eedeyn jiray in uu ku lug leeyahay ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo musuq maasuq balse Eedeymahaas isagu hore ayuu u beeniyay.
China oo markii ugu horeysay taariikhda sunduuqa lacagta adduunka ka qabatay jago muhiim ah
New York:-China ayaa heshay markii ugu horeysay jagadii ugu sareysay ee maamul sunduuqa lacagta adduunka taasi oo ah talaabo lagu aqoonsanayo awoodda dhaqaale ee soo soo koraysa ee China dhaqaalaha adduunka.
Madaxa sunduuqa lacagta adduunka haweenayda lagu magcaab Christian Laggard ayaa u magacowday khabiirka 58 jirka shiinees-ka ninka lagu magcaabo Zuu Miin jagada ku xigeenka agaasimaha guud ee sunduuqa lacagta adduunka.
Mr Zuu ayaa horey u ahaan jrey agaasime kuxieenka bangiga dhexe ee China iyo la taliyaha gaarka ah ee Sunduuqa lacagta adduunka.
Lagarde ayaa sheegtay in sidoo kale David Lipton oo ah la taliyaha aqalka cad uu ka bedeli doono John Libeski jagada kuxigeenka koowaad ee agaasimaha sunduuqa lacagta aduunka.
Mr Zuu ayaa la filayaa in uu howshiisa bilaabo 26 July.
Laggarde iyo Lipton ayaa ahaan doono halbowlayaasha dhaqaajiya siyaasadda sunduuqa lacagta adduunka halka agaasime kuxigeenada guud ay wadi doonaan wadatashiyada dowladaha xubnaha ka ah sunduuqa lacagta aduunka gaar ahaan hogaaminta kulamada golaha sunduuqa lacagta adduunka.